Qoraalka maanta ee Jon Arnold wuxuu ahaa mid cajiib ah talooyin ku saabsan qaabeynta degel, laakiin waxaan dareemay faallooyinkii ugu horreeyay ee aniga igu sifeeyay boostada. Taasi waa calaamad sheekeyn ah waxaan u baahanahay inaan uga dhigo qoraaga macluumaadkiisa mid caan ah.
Uma abuurin wijetar tan (waana layaabay in cid kale aysan haysan!), Laakiin waxaan awooday inaan kufiirsado dhinacyadayda mawduucayga WordPress-ka kuna daro koodhka soo socda:
hel_magaalada_meta('email') waxay dib u soo ceshanaysaa cinwaanka e-maylka ee qoraaga waxayna u gudbinaysaa shaqada get_avatar. The xikmad function wuxuu u tarjumayaa emaylka aqoonsi loo gudbiyay server-ka gravatar-ka si loogu dhejiyo sawirka ku habboon. Tani waa lagama maarmaan maadaama aad rabto inaad iska ilaaliso sameynta cinwaanka emaylka ee laga heli karo isha bogga… spammers waxay jecel yihiin inay soo gurtaan emayllada.